Teboka vavaka hanoherana ny drafitra ratsy | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hanoherana ny drafitra ratsy
Teboka vavaka hanoherana ny drafitra ratsy
Androany dia hivavaka amin'ny fanoherana ny drafitra ratsy isika. Tahaka ny ananan'Andriamanitra ny drafiny amin'ny fiainantsika, dia toy izany koa ny devoly izay mamolavola ny drafiny amintsika. Ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia ratsy foana ny drafitry ny fahavalo. Tsy mahagaga raha milaza ny ao amin'ny bokin'ny Jaona 10:10 fa ny mpangalatra dia tonga mba hangalatra sy hamono ary handrava. Betsaka ny olona tratry ny teti-dratsy ataon'ny fahavalo satria nandà ny mailo ara-panahy ny hafetsen'ny devoly izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany dia misy olona voavonjy fotsiny amin'ny fahasoavana; raha tsy izany dia nanjary babon'ny devoly izy ireo. Tsarovy ao amin'ny bokin'i Estera ny tantaran'i Hamana sy Mardokea. I Hamana dia nankahala fatratra an'i Mardokea ka nikasa ny hanantonana an'i Mardokea amin'ny hazo lava mirefy 50 hakiho, izay nomaniny hamono ny Jiosy rehetra. Fa naringan'Andriamanitra ny fikasan'i Hamana ka novonoiny tamin'ny fandrika izay natsangany ho an'i Mardokea.
Ity torolàlana am-bavaka ity dia hiompana amin'Andriamanitra handrava ny teti-dratsy ataon'ny fahavalo amin'ny fiainana ka hahatonga azy ireo hamono tena amin'ny tetikasany. Tahaka an'i Hamana latsaka tamin'ilay fandrika namboariny ihany ho an'i Mardokea, dia ho faty toy izany koa ny fahavalonao rehetra amin'ny fikasan-dry zareo hampijaly anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra tsy maintsy takatsika amin'ny maha mpino antsika dia ny fitsaharan'ny fahavalo. Ny soratra masina dia mamaritra azy ho toy ny liona mierona mitady izay harapany; izany no tsy tokony hamelanao ny fiambenana anao amin'ny toerana fivavahana. Mivavaka aho amin'ny famindram-pon'ny Avo Indrindra mba tsy handresen'ny fahavalonao anao amin'ny anaran'i Jesosy.
Satria novidiana tamin'ny ran'i Jesosy sarobidy ianao, ny drafitra ratsy rehetra amin'ny fiainanao sy ny anjaranao dia simban'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy. Makà fotoana handinihana ity toro-lalana amin'ny vavaka ity. Andriamanitra dia vonona hanao fahagagana. Hisy fahagagana maro rehefa mampiasa ity torolàlana ity ianao, dia haseho aminao ny drafitry ny fahavalo, ary handresy azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, tonga eto anatrehanao anio aho handrava ny teti-dratsy rehetra ataon'ny fahavalo amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Raiko, izay sakaiza ratsy rehetra eo amin'ny fiainako izay tsy dia mahasoa ahy loatra, mivavaka aho mba hamongoranao azy ireo amin'ny afon'ny Fanahy Masina.
Tonga manohitra ny teti-dratsy rehetra sy ny fanodikodinan'ny fahavalo ahy amin'ny fiainako aho; Aringako amin'ny afon'ny Fanahy Masina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ny lehilahy sy ny vehivavy izay manana fikasan'ny fony ho ratsy amiko dia haringana avokoa ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, mivavaka aho mba tsy hamelanao ny fahavaloko alohan'ny hamelezany ahy. Tompoko, alohan'ny hitondran'izy ireo ny drafiny mandritra ny fiainako dia mivavaka aho mba hampiasanao azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo Andriamanitra ô, tahaka ny nanimbanao ny fikasan'i Hamana momba an'i Mardokea, tahaka ny namonoanao an'i Hamana tamin'ny fikasana hamono an'i Mardokea, dia mivavaka aho mba ho faty amin'ny fahavaloko rehetra ny fahavaloko amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny drafitra ratsy ataon'ny fahavalo rehetra hanakorontanana ny fahombiazako, ny fikasan'izy ireo tsirairay hanakiviana ahy eo amin'ny fiarahan'ny fahombiazana, Tompoko, avelao ny fandringanana toy izany amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy
Ray Tompo ô, ny drafitry ny fahavalo rehetra haneso ny fiezahako, ny drafitra rehetra hanelingelina ahy amin'ny fotoanan'ny fahombiazako, manohitra izany drafitra izany amin'ny herin'ny Fanahy Masina aho.
Ray Tompo ô, ny drafitra rehetra ataon'ny fahavalo hampijaliana ahy amin'ny aretina mahatsiravina, dia tonga amin'ny fanoherana izany drafitra izany amin'ny anaran'i Jesosy aho. Tompoko, ho an'ny soratra masina, hoy i Kristy dia nitazona ny fahalementsika rehetra tao aminy, ary nositraniny ny aretintsika rehetra. Ny afon'ny Fanahy Masina dia manimba ny Tompo, ny drafitry ny fahavalo rehetra hahatonga ahy amin'ny aretina.
Ny drafitry ny fahavalo rehetra hanodinkodinana ny atidohako dia aringano amin'ny anaran'i Jesosy ny drafitra toy izany.
Hoy ny soratra masina: ambarao zavatra iray, dia ho tanteraka, Tompoko, ny fanapahana ny ratsy rehetra amin'ny fahavaloko amin'ny fiainako dia hodorana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, potipotehiko daholo ny toerana avo rehetra napetraky ny fahavalo teo alohako, ny teti-dratsy rehetra manohitra ny anjarako, ny drafitry ny demonia hanimba ny hoaviko dia miparitaka amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo ô, manome didy anao aho fa amin'ny fisavoritahana dia mankany amin'ny tobin'ny fahavaloko. Aoka ho menatra ny lehilahy sy ny vehivavy izay nilahatra taorian'ny nahalavoako, avelao izy hamamo amin'ny ràny toy ny vera misy divay mamy, homena ny nofony amin'ny anaran'i Jesosy izy.
Ny drafitry ny demonia ataon'ny fahavalo rehetra hahatonga ahy handatsa-dranomaso ny zanako dia manimba ny drafitra tahaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny drafitra rehetra ataon'ny fahavalo hamelezana ny zanako amin'ny fanahin'ny maditra, dia aringako ny afo tahaka izany amin'ny alàlan'ny afon'ny fanahy masina.
Ny drafitra ratsy rehetra hanimbana ny asako akademika, ny drafitra ratsy rehetra nalefa tamiko hanala ny fitadidiako; Aringako amin'ny herin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa voasoratra hoe: Raha misy tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra manome malalaka tsy misy tsiny. Mitady ny fahendrenao aho, omeo ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa voasoratra fa ny fanantenan'ny zavaboary dia miandry ny fisehoan'ny zanak'Andriamanitra. Ray Tompo ô, manapa-kevitra aho fa manomboka izao dia manomboka maneho amin'ny fahaiza-manao nomenao ahy aho. Ny drafitra rehetra ataon'ny fahavalo hamongorana ny drafitrao amin'ny fiainako dia aringako amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra.
Tompoko, manapa-kevitra aho fa amin'ny fiainako sy ny fianakaviako dia hijoro fotsiny ny torohevitrao. Mandidy ny zanako rehetra sy izay rehetra nitahianao ahy aho; Mandidy aho fa ny torohevitrao irery no hijoro amin'izy ireo.
Previous lahatsoratraVavaka ho an'ny taona vaovao 2021
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana teti-dratsy
Teboka vavaka hivavahana alohan'ny handehanana any amin'ny Masoivoho
Hivavaka 30 amin'ny mpamono fahitana